Date: June 10, 2016Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Finfinnee, 10 Wxabajjii 2016) Miseensoti OPDO lama sababa malaanmaltummaatiin hidhaman; hidhamuun OPDO lamaanii kun garuu siyaasatti hidhata akka qabu himamaa jira.
Gabaasaan Oromedia Finfinnee irraa akka gabaasetti hidhattooti Tigiraay Waxabajjii 9 bara 2016 sadarkaa itti aanaa pireezdaantiin itti gaafatamaa Biiroo Qonna Oromiyaa ta’uun tajaajilaa kan ture obbo Zalaalam Jamaanaa qabata malaammaltummaan to’annoo jala oolcheera.
Haga guyyaa hidhameettis to’annaa fi hordoffii humnoota tikaa jala akka ture beekameera.
Obbo Zalaalam itti gaafatamummaan caasaa OPDO fi mootummaa keessa wayita hojjechaa turetti taayitaa ofiitti fayyadamuun faayidaa hin malle argachuuni shakkamee akak hidhametti himame.
Haata’uutii, hidhamuun isaa waldhabdee kanaan dura pirezidantii Oromiyaa, Muktaar Kadiir, waliin qabu irraa akka madde keessa beektoti ni dubbatu.
Kana malees, kantiiban magaalaa Sulultaa duraanii obbo Diroo Damee maqaa ofii fi firoota isaanitiin lafa baay’ee qabachuu isaanitiin shakkamee to’annoo jala kan oolfame ta’uun beekameera.
Caffeen Oromiyaa ajaja Togorootaan bulaa jirus dhimam kana raawwachiisuuf walga’ii ariifachiisaa Wxabajjii 8 bara 2016 taa’en, obbo Zalaalamii fi obbo Diroorraa mirgi himatamuu dhabuu irraa mulquun ni yaadatama.
Miseensoti OPDO haala kana hubachuun yeroo kana keessatti gara qabsoo Oromootti dabalamanii mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuu keessatti gahee seena qabseessa akka bahan sabboontoti Oromoo waaamicha godhanfii jiru.
Previous Previous post: Qorumsi Seensa Barnoota Olaanoo Haqame
Next Next post: Itiyoophiyaa: Tarkaanfiin humnaa mormii ukkaamsuf fudhatame namoota dhibbaatamaan lakkaawwaman ajjeesise